एनसेल मेला हुन नदिने नेकपाको घोषणा (प्रेस विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ‘एनसेल मेला २०७६’ हुन नदिने जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘भ्रष्ट र देशद्रोही कम्पनीले &lsqu...
नयाँ पत्रिकालाई समाचारको तथ्यता पुष्टि गर्न सञ्चारमन्त्रीको चुनौती
काठमाडौँ । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले समाचारको तथ्यपरकता पुष्टि गर्न नयाँ पत्रिकालाई चुनौती दिनुभएको छ। आज सामाजिक सञ्जाल ट्वीट मार्फत मन्त्री बाँस्कोटाले नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले नेपाली पत्रकारित...
उपनिर्वाचन: नेकपा ३०, कांग्रेस १३ स्थानमा विजयी (नामावलीसहित)
काठमाडौँ । आइतबार सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका सदस्यको उपनिर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएको छ । अन्तिम नतिजा अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ३० स्थानमा विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ...
सधैँ जनताको पक्षमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता : प्रदेश सदस्य वली
दाङ क्षेत्र नं ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित विमला खत्री (वली) आफू सधैँ जनताको पक्षमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाबाट आज विजयीको प्रमाणपत्र लिएपछि खत्रीले आफू...
एक मतले हारेपछि पुन: मतगणना गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडाैं । धरान उपमहानगरपालिका ७ मा पुनःमतगणना गर्न कांग्रेसले माग गरेकारे छ । नेकपाका उम्मेदवार जनक सुवेदीले वडाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा एक मतले कांग्रेसलाई पछाडी पारेपछि नेपाली कांग्रेसले पुन: मतगणनाको माग गरेको...
प्रतिनिधिसभाका लागि कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा भएको उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट उम्मेदवार बनेकी विद्या भट्टराई भारी मतान्तरसहित विजयी हुनुभएको छ । यो विजयसँगै हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका तत्कालीन पर्यटन तथा न...
१ भोट बढि ल्याएर वडाध्यक्षमा नेकपा विजयी
काठमाडौं । धरान उपहानगरपालिका वडा नम्बर ७ को अध्यक्षका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा विजयी भएको छ । उपचुनावमा नेकपाका जीवन सुवेदी एक मतको अन्तरमा बिजयी हुनु भएको छ । नेकपा उम्मेदवार सुवेदीले ६२२ मत प्राप्त गर्नुभएको हो । ...
दाङ ३ (ख)मा नेकपाकी विमला वलीकाे फराकिलो जित
काठमाडौं । दाङ– ३ (ख)को उपनिर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की उम्मेदवार विमला वली विजयी हुनुभएको छ । वलीले ५ हजार १ सय ४ मतको फराकिलो अन्तरले विजय हासिल गर्नुभएको हो । नेकपाकी उम्...
राप्रपा उम्मेदवारलाई आफ्नै एक भोट मात्र !
काठमाडौं । खोटाङको सोकला गाउँपालिका वडा–३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर खड्काले आफ्नै एक भोट मात्र पाएका छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी नेकपाकी उम्मेदवार शिवकला राईले तीन सय ९१ मत प्राप्त गर...
ममाथि पनि मुद्दा छन,दाेषी ठहरिए कारबाहि भाेग्न तयार छु : प्रचण्ड(भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका सबै राम्रा नराम्रा घटनाको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनु भएको छ । आइतबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा द्वन्द्वकालमा म...
मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा अब्बल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा अब्बल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ देखिनु भएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन ९४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गर...
धरान उपमहानगरमा काँग्रेसले उछिन्यो नेकपालाई
धरान । रिक्त स्थानका लागि शनिवार भएको उपनिर्वाचनको मतपरिणाम आइरहेको छ । चासोका साथ हेरिएको धरान उपमहानगरपालिको मेयरका लागि भएको उपनिर्वाचनको मतगणना जारी छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । का...
बागलुङमा मतगणना सुरु...
बागलुङ । बागलुङमा प्रदेशसभा सदस्य र वडा अध्यक्षका लागि शनिबार भएको उपनिर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने भनिएपछि ढिला गरी सुरु भएको हो। उपनिर्वाचनका लागि सत्तारूढ नेकपा र राष्ट्रिय ज...
दाङमा नेकपाको अग्रता फराकिलो बन्दै , पछिपछि कांग्रेस
काठमाडाैं । प्रदेशसभा सदस्यका लागि दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) को मतगणनामा नेकपाकी उम्मेदार विमला कुमारी खत्रीले अग्रता कायम राख्नुभएकाे छ । स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाले जितेका बबई गाउँपालिका १ र तुलसीपुर उपमहानागरपालिका १ वडाको ३१०१ ...
धरानमा नेकपा र कांग्रेसको तिव्र प्रतिस्पर्धा, झिनो मतको अन्तर
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच तिव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । ४ वटा वडाको मत गन्दा ५७ मतको अन्तर रहेको छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार ९८५१ भोट गणना हुँदा नेकपा उम्मेदवार प्रकाश राई प्रकाश राई ४५७४ म...
उपनिर्वाचन: कसकाे कहाँ कहाँ जित भयाे ?
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनअन्तर्गत हालसम्म ३९ वडाध्यक्षको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म प्राप्त पछिल्लो परिणामअनुसार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २२, नेपाली काङ्ग्रेस...
भक्तपुरमा कांग्रेस २ हजार भन्दा बढि मतान्तरले विजयी
काठमाडाैं । भक्तपुर क्षेत्र नं. १(क) को प्रदेशसभा सदस्यमा २ हजार २ सय ४२ मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका कृष्णलाल भँडेल विजयी हुनुभएकाे छ । १३४४८ मत पाएर उहाँ विजयी हुनुभएकाे हाे भने नेकपाका उम्मेदवार डि पि ढकालले ११२०६ मत पाउनुभए...
दाङमा नेकपाकाे अग्रता
काठमाडौं । दाङ क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा २ मा नेकपाले अग्रता लिएको छ । दाङको बबई गाउँपालिका वडा नं. १ को मतगणना सकिँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की उम्मेदवार विमला ओलीले ८४० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेद...
कास्की-२ : कुन वडामा कसकाे कति मत ?
पोखरा । कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अहिले उक्त क्षेत्रका ३३, २१ र २० नम्बर वडाको मतगणना सकिएको छ। ३ वटा वडाको मतगणना सकिदा नेकपाकी उम्मेद्वार विद्या भट्टराईले अग्रता लिदै आउनुभएको छ...
काठमाडौँ । खोटाङको साकेला गाउँपालिका–३ खिदिमाको वडाध्यक्षमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार शिवकला राई विजयी हुनुभएको छ। तत्कालीन वडाध्यक्षको मुत्यु भएपछि रिक्त रहेको वडाध्यक्ष पदका लागि शनिबा...
<< Page2of 63 >>